Akụkọ kachasị ọhụrụ banyere ọmụmụ ihe na Naijiria & ụwa | TAA
2019: Anyị enweghị mmasị na coalitions, njikọ - APDA
Usoro mgbasa ozi US na-enwe mmekọrịta siri ike na Russia - Nikolai Patrushev
Ibrahim Magu: Okwalite m na-akwalite maka ọgụ na-enweghị isi
2019: Isi nke Ayodele na-agba Senator Saraki ume ka ọ gaa maka onyeisi oche
EKEDC kwadoro ndị ahịa ahịa 15 Lagos na-ekwu na a na-ezu ohi
Union na-atụ egwu ala Kenya Airways n'elu akpa nke 20 ndị Naijiria
SEC ndị mmekọ IFC, AfDB iji kwalite ego ego Sukuk
Ndị na-eji eletrik eme ihe na-adọrọ Mgbakọ Mba maka iwu megide ụgwọ ịgbaziri agbaziri
Dance DJ Avicii egwu egwu na-aga na 28
Davido: M ga-adaba nnukwu egwu na Nigeria na April ...
Chimamanda Adichie aha ya bụ Harvard na-ekwu okwu n'ụbọchị
Ememe Ugbo Afrika - ime ka ndi Afrika niile bido
José Mourinho: Egwuregwu Wembley enweghị uru maka Tottenham
Bayern Munich's Manuel Neuer na-azụ ụgbọ mbụ maka ọnwa asaa
José Mourinho: Manchester United nwere ike ịhụ na ọ 'agaghị ekwe omume' iji merie Premier ...
Antonio Conte: I nweghị ike iji mpempe akwụkwọ Chelsea tụnyere Jose Mourinho
Onye nlekọta isi nke onwe ya na akaụntụ Zahra Buhari Facebook
Kaspersky na-ebipụta akwụkwọ edemede na-egosi na Twitter amachibido mgbasa ozi ya
Ndị ọkà mmụta sayensị na-achọpụta ụdị ọkpụkpụ ndị na-agbawa ihe
Ụlọikpe Kasị Elu nke Germany na-achịkwa ndị na-akwado iwu na-akwado iwu
Nkebi nke 5 na nke Mohammed Bello Adoke
Ọnọdụ ala Naijiria
Ònye ga - azọpụta ndi Naijiria site na President Buhari?
Gbuo ego tupu ya egbu anyị!
Egwuregwu bụ Ndụ na Ndụ bụ Egwuregwu!
Na Foto: ndị Biafra gbara akwụkwọ na London ka President Buhari zutere Queen ...
Video: Ndi ntorobia Naijiria achoghi ime ihe obula - President Buhari
Atiku Abubakar: Mwakpo na Senate bụ ihe dị ize ndụ
Vidio: Enwere m mmeri na mmekọahụ na 17 - Chimamanda Adichie
Home Tags feasibility Study
VP Osinbajo: Ihe mere Naijiria ga - eji mee ihe iji zọpụta Osimiri Chad
Onye isi oche nke Naijiria, Prof. Yemi Osinbajo, kwuru na Nigeria ga-eme mgbalị iji chekwaa Osimiri Chad ma wepụta mpaghara ahụ site na nnukwu nsogbu akụ na ụba, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na gburugburu ebe obibi.
José Mourinho na-ekwusi ike na Tottenham Hotspur ga - enwe "ohere ọ bụla" na ha na Manchester United n'agbanyeghị na eji egwu egwu egwu na Wembley.
Bayern Munich nwetara nkwado na Manuel Neuer na-ekere òkè na ọzụzụ otu maka oge mbụ na ọnwa asaa.
José Mourinho: Manchester United nwere ike ịchọta na ọ gaghị ekwe omume iji merie Premier League n'oge ọzọ
José Mourinho kwetara na Manchester United nwere ike "agaghị ekwe omume" iji merie Premiya Njikọ ahụ n'oge ọzọ ọ bụrụ na Manchester City nwere ike ịmeghachi ụdị ha.
Nnukwu ndi Democratic People's Party (APDA) ekwuola na ndi otu a agaghi abanye na nkwekorita ya na ndi ozo di iche iche ma obu ndi ozo n'ihu nhoputa ndi ochichi 2019.
Mba United States agbanweela n'ụzọ doro anya iji mgbagha siri ike na mmeghe na-emeghe mmekọrịta na njikọ Russia, odeakwụkwọ nke Ụlọ Nche Nchebe Russia Nikolai Patrushev kwuru na Fraịdee.
Tweets site taa
Rep Ogbeide-Ihama na-atụle President Buhari dị ala maka nchekwa, akụ na ụba
Onye otu, nke nọchitere Oredo Federal Constituency nke Edo State na National Assembly, Mr Omoregie Ogbeide-Ihama, emetụtawo nlekọta nke President Muhammadu Buhari dị ala maka nchebe na akụ na ụba, dịka ọ kpọkuru gọọmenti ka ha depụta ihe nchebe dị mkpa iji chọpụta ụdị igbu ọchụ ndị dị ugbu a na-agafe na mba ahụ.
Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Luka Modric nke Real Madrid na nsogbu Malaga
Gareth Bale, Cristiano Ronaldo na Luka Modric ahapụwo ndị agha Real Madrid maka nsogbu La Liga nke Sunday na Malaga dị ka akụkụ Zinedine Zidane si eleghachi anya na nke atọ na tebụl.
AGF Abubakar Malami choro ka o kwusi okwu banyere nyocha nke Boko Haram
Òtù ndị omenala na omenala nke ndị Yoruba, Afenifere, rịọrọ ka ndị isi ụlọ ọrụ Federation, Abubakar Malami kwụsị, n'ihi na ha rịọrọ Ụlọikpe Na-ahụ Maka Mpụ na International Criminal Court ka ha ghara ịmalite ime nnyocha banyere òtù Boko Haram.
Onye nchịkwa na-agba chaa chaa na-ekpochapụ ihe gbasara mmekọahụ nwoke nwere mmasị nwoke na-akwụ ụgwọ
Nwunye ndi otu nwanyi nke Rwandan kpochapuru ebubo na o mere ka ndi mmadu nwee mmekorita nwoke na nwanyi nabatara ikpe nke ulo ikpe iji nye ya $ 47,000 (£ 32,000) maka ugha.
Ndị agha Naijiria na-akpọ ndị isi obodo na Taraba ajụjụ maka ịjụ ajụjụ
Onye isi oche, Njikọ ndị agha (DMI), rịọrọ onyeisi oche nke ógbè n'ógbè Takum Local Government nke Taraba, Mr Shiba Tikari, ka ọ kọọrọ ya ụlọ ọrụ ya maka ịjụ ajụjụ na Friday.
Dezie na Live CSS
Dee CSS ma ọ bụ OZI ma zọpụta ihe. CTRL + SPACE maka akpaaka-zuru ezu.